Uma siseyizingane ziningi izinto ezishisayo, thina dream of epholile futhi kubanda, sizama ukufudumeza. Ngakho-ke, okwenza libukeke njengendandatho impahla efana ucwecwe ukushisa-buka lokwentile, waqhutshelwa Isifiso sokuzenzela izimo zokuphila komuntu ukhululekile futhi kule ukushisa nokubanda okukhulu. Namuhla sizobe sesibheka ukuthi kuyini.
Heat-obonisa ifilimu isetshenziswa ngezigaba eziningi ukwakhiwa:
Ukwakhiwa kophahla. Kulokhu, kuye ngohlobo, ngeke nje ufudumale, kodwa ikhonze njengomPristi ungangenisi amanzi.
Ukuze ukwahlukanisa of izindonga. Ingasetshenziselwa kokubili izindonga ngaphandle, futhi ngesikhathi ngaphakathi.
Floor. Kulokhu, ukushisa-obonisa phansi ifilimu isetshenziswa futhi lapho ama-apharathasi ezivamile, futhi uhlelo lokukhuphula "phansi evuthayo".
Ukuze amafasitela. izinhlobo ezimbili kugqame ungabahlukanisa. Umsuka - kwagezi, kwesibili - le kugqame ukuchayeka ezishisayo (ngokugcina epholile ngo ukushisa).
Esinye isici - ukusetshenziswa in ukulima zokugcina.
imoto Glass futhi izithuthi zomphakathi.
Njengoba singabona, ingasetshenziswa njengendlela yokuvikela ukongiwa ukushisa nokubengezela ukushisa. Ngezansi sizobheka kungani ifilimu ukushisa-obonisa isetshenziselwa amafasitela.
Cishe njalo igumbi has a window. Anjengesibani nomthombo wokukhanya ukupholisa zemvelo. Njengomthetho, hlala 25-30% kwendawo udonga. Futhi uma wenziwa ukufudumala phansi, izindonga, ophahleni, lokho ifasitela? A therethrough ukhuphukela 60% yokushisa ebusika. Ngakho-ke, yasungulwa eziningi ubuchwepheshe:
Main Ukuvikelwa indlela ebusika - wonke amalunga phakathi iwindi futhi uzimele nabekwa uphawu uhala uphawu iphepha okhethekile. Wonke umuntu ukhumbula ukuthi ngesikhathi ukwahlukanisa enjalo ebusika, kwakunzima pholisa igumbi.
Thina necebo esikhundleni sokhuni amawindi plastic kahle ekupheleni, ngaleyo ndlela sigweme okusalungiswa.
Kodwa ngisho nalokhu akuzange kusho ukugcina ukushisa. Ngenxa angumtfombo ngokuphazamisa iyona ingilazi uqobo. Into yokuqala efika - lokhu ukushisa wamboza amakhethini iwindi amakhethini. Khona-ke lwaqala unamathele kuyo yonke kungenzeka ngezindlela ucwecwe amashidi, okuyinto wadlala indima reflectors. Lokhu kungabi sengxenyeni ukushisa nokukhanya yemvelo, okuyinto abangela eziningi kwezingqinamba. Njengoba ubuchwepheshe hhayi emi namanje, laqala ukusetshenziswa ngo-self-Yesigcilikisha base ifilimu, okuyinto sebeqalile kakade ukuba ugcine ukushisa ebusika ehlobo ukuvimbela okweqile yamagceke.
Nge ukuthuthukiswa nanotechnology metallized amafilimu kwathathelwa indawo emisha, polymer. The main umehluko - ukusebenza okuthuthukisiwe nokuqina kwayo.
Ngenxa ukuthi lolu hlobo Heat kwakuqala ukwanda? Endaweni sibonga ngowokuqala izici zangaphandle yayo. amafilimu anjalo musa ukushintsha ukubukeka izakhiwo, ngakho elinye igama kubo - yezakhiwo. Futhi impahla yabo eyinhloko - adlulisele ukukhanya ebonakalayo futhi uvimbele kuze kube u-75% ukushisa ekhazimulayo ehlobo. A ebusika egijima ngakolunye uhlangothi - elingaphakathi ibonisa ukushisa Abuyela endlini emuva kwezikhathi, kanjalo sivumele ephuma ngaphandle ukukhanya ebonakalayo.
Iwindi ukushisa-obonisa ifilimu has eziningi eziwusizo elingenakuphikwa:
ukufakwa lula futhi ukususwa. Kalula gluing ivumela ukufakwa yezandla zabo.
Ukuvikeleka. I kwabantu of ifilimu kuyivumela ukuba wageza futhi usebenze njengoba elicwebezelayo ezivamile.
Summer kukuthenga air-conditioning, futhi ngenxa yalokho, kancane ugesi ukusetshenziswa.
Ebusika, ukonga on Ukushisa, neliyoba ukunciphisa izindleko energy.
ukubukeka Tebuciko. Le filimu has ukukhanya elikhulayo lenkolelo-grey noma okwesibhakabhaka. Ingase futhi isetshenziselwe izakhiwo zomlando eziligugu.
ukunakekelwa Easy. Ngokufana amafasitela ezivamile ahlanzekile.
Ukuvikelwa Maximum ngokumelene ultraviolet amaza okushisa, ngaleyo ndlela okuhambisa imisebe ebonakalayo, okuyinto kudala induduzo ehlweni lomuntu.
Security. Uma ingilazi siphukile, ihlala exhunywe ifilimu, t. E. Doesnt asakazekele izingcezu ezincane.
Noise yehlisa kakhulu umsindo womhlabathi.
intengo imali. Izindleko isilinganiso ngalinye imitha square - ruble 550.
Ikhono ukusebenzisa iwindi ngasiphi isikhathi sonyaka deku ukupholisa zemvelo nokukhanya.
Okumbi zihlanganisa kuvinjelwe egeza ubhuqu yokuhlanza amanxusa kanye nokusetshenziswa izipanji kanzima. Sincoma ukuthi usebenzise ethambile indwangu iraba, ama-wiper. Njengoba singabona, ifilimu ukushisa-obonisa ngaphezu umsebenzi walo eyinhloko ukonga ugesi ukusetshenziswa izindleko.
Ukufakwa kanye nokusebenza
Njengoba kushiwo ngaphambili, ukufakwa ifilimu akuthathi isikhathi esiningi futhi ayidingi ezandleni professional. Okokuqala udinga begeza amafasitela degrease ebusweni. Sticker ifilimu ikhiqizwa ngaphakathi. Ngokusobala enamathela ovikelayo ine isizinda ingcina, embozwe nge ifilimu zokuzivikela. Uma usayizi ingilazi kanye ifilimu akufani, kumele wasika yobukhulu. Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba asuse ungqimba zokuzivikela futhi sinamathele ingilazi, ahlelembe ebusweni nge indwangu ethambile. Ukuze kube lula, ifilimu zokuzivikela asikwazi ukuqeda zonke ngesikhathi esisodwa, kodwa kancane kancane njengoba sinamathela ukuvimbela amashashazi. I enamathela ifilimu kulula ukuhlanza by ezivamile okuyiwa amafasitela. Ungayisebenzisi chemical elomile izipanji nge olwalwenza, kungaholela ekwakhekeni imihuzuko phezu.
Ngezinye izimpendulo eziningi, omunye ifilimu Okulandelayo ukushisa-obonisa IR Sky Blue (SRC HP7575). Lokhu kungenxa ukubukeka yobuhle isakhiwo emva gluing yokuvikela kanye ekulenzeni libe namandla. Film has a enganamandla kakhulu Reflux grey noma okwesibhakabhaka. Ukuvikelwa okunjalo isetshenziselwa ngamafasitela imoto, ezokuthutha zomphakathi. Ngokwe Izibuyekezo ifilimu ukushisa-obonisa IR Sky Blue enza yokwakha isimo ukhululekile zasendlini ehlobo ngokusebenzisa ungqimba ehlukile zingabonisa ukukhanya infrared. Futhi ebusika kukuvumela ukuba ugcine on Ukushisa, okuyinto ekahle kakhulu emizini yabazalwane.
ukushisa-obonisa ifilimu has eziningi eziwusizo ezenza kube ezikhanga kakhulu. Ukuphumelela, ikhono lokufeza ukufakwa yezandla zabo ukuba sizibuze le nto ezithakazelisayo abathengi.
Yini ukunikeza umama usuku lokuzalwa: imibono esisebenzayo